Ndarama AQ Kuwedzera-Ropa Glucose Kuongorora Nhevedzano-Sinocare
Ndarama AQ Uyezve
LUNULA nanoTM patent yeropa sampuro yekushandisa tekinoroji;
99.99% yakachena goridhe elektrode bvunzo dhizaini ；
Yakakura HCT bvunzo renji, Yakasimba anti-kupindira
1. Yakagadzirirwa Shandisa
Iyo Goridhe AQ Plus Ropa Glucose Yekutarisa system inoitirwa kuti ishandiswe mukuyera kuwanda kweshuga muropa remunhu rose rakatorwa kubva pachigunwe (capillary) kana kubva mutsinga (venous) kana kubva kune arteri (arterial). Iyo inoitirwa kushandiswa nevanhu vane chirwere cheshuga kumba kana kiriniki saiti semubatsiro mukutarisa kushanda kwehurongwa hwavo hwekudzora chirwere cheshuga.
2. Bvunzo weChinyorwa
Kuedzwa kweglucose kunoenderana nekuyerwa kwemagetsi kwazvino kunokonzerwa nekuita kweshuga neiyo FAD glucose dehydrogenase pane iyo electrode yemutsara. Ropa kana control solution sampuro inokweverwa mukati memupendero weyedzo strip kuburikidza nekapillary action. Glucose mune muyenzaniso inopindirana neiyo FAD glucose dehydrogenase uye inogadzira maerekitironi, ayo anogadzira magetsi emagetsi. Iyo Gold AQ Plus yeropa glucose mita inoyera magetsi emagetsi uye inoverenga mhedzisiro yeglucose. Mhedzisiro yeglucose inoratidzwa nemamita muchikamu che mg / dL kana mmol / L.
3. Nezve iyo Goridhe AQ Kuwedzera Ropa Glucose Bvunzo Strip
Iyo Goridhe AQ Plus yeropa glucose test strip inoitirwa kushandiswa neGold AQ Plus yeropa glucose mita kuyera huwandu hweropa glucose murutsva capillary yakazara ropa kana venous ropa kana arterial ropa. Iyo Gold AQ Plus yeropa glucose test tambo inoshandiswa neGoridhe AQ Plus yeropa glucose mita inopa yakazara test system iyo inoitirwa iyo vitro yekuongorora kushandiswa nevanhu vane chirwere cheshuga. Iyo Goridhe AQ Plus yeropa glucose test strip haidi kukodha. Ndokumbira utarise kune "Kuita Ropa Glucose Bvunzo" chikamu kune yakazara rairo.
Iyo Goridhe AQ Plus yeropa glucose test strip ine zvikamu zvinotevera:
Ropa huwandu 0.8μL
Kuyera nguva 5s
Mamita ekuchengetedza / mamiriro ekufambisa -20C ~ 55 ℃
divi (103mm (L) x 60mm (W) x 24mm (H))
uremu pamusoro pe59g
Power mabviro 2 AAA alkaline mabhatiri
ndangariro 999 eropa glucose kuyerwa mhedzisiro ne
200 Kudzora Solution kuyera mhedzisiro ne
Kwayedza mamiriro Tembiricha: 10 ℃ ~ 40 ℃
Hukama Hwehukama: 10% ~ 90% RH (isiri-condensing)
Kukwidza: Kusvika pamamita 10100 (3078 metres)
Ongorora: Shandisa mukati meakatsanangurwa mamiriro ezvakatipoteredza chete.
Mamiriro ekushanda 10 ℃ ~ 35C≤80% RH
Kwayedza bvisa makemikari akaumbwa FAD glucose dehydrogenase, potasium ferricyanide,
Chengetedza mhinduro yemakemikari Mvura, shuga, kuchengetedza, dhayi, phosphate buffer,
viscosity yekuvandudza vamiririri
Kwayedza tambo yekuchengetedza mamiriro 1, ~ 30, 10% ~ 90% RH
Sirifu upenyu Makore gumi (inofungidzirwa nemuedzo kanomwe pazuva）.
Munguva yekushandisa, mushandisi anofanira kuchengetedza chigadzirwa
tarisa kune izvo zvinoshandiswa nemushandisi zvemanyorerwo.
1) 99.99% goridhe electrode, kuitisa ka1,400 XNUMX nguva pane kabhoni electrode.
2) Iine yepamusoro electrochemical chivakwa uye yakasimba zvakanyanya ngura kuramba.
3) Inokwanisa kuona tembiricha yeropa, HCT uye ambient tembiricha nemazvo, uye otomatiki kugadzirisa mhedzisiro kutsauka kunokonzerwa nezvinhu zviri pamusoro.
LUNULA nano patent yeropa sampuro yekushandisa tekinoroji: Pakukwirisa kwehuwandu uye nzvimbo dzemhepo dzinonetesa microporous, iro ropa rinoshandisa kumhanyisa rave pachena kuvandudzwa.